Wararka Maanta: Sabti, Aug 24, 2013-Kooxo Hubeysan oo Magaalada Muqdisho ku dilay Gudoomiyihii Olombikada Soomaaliyeed ee Degmada Dharkeenley
Marxuumka aya lagu toogtay shalay gellinkii dambe illinka hore ee gurigiisa oo ku yaalla degmadaas, waxaana toogashadiisa ka dambeeyay sida ay u sheegeen warbaahinta dad goobjoogayaal ah laba wiil oo bastoolato watay.
“Amiin waxaa lagu toogtay gurigiisa hortiisa isagoo ka yimid ciyaaro ka socday garoonka degmadaas, waxaana afar ka mid ah rasaasta uga dhaceen madaxa, isbitaalka Madiina ayuuna ku geeriyooday,” ayuu yiri guddoomiyaha degmada Dharkeynley Macallin Cabdulle Cali Hilowle oo ka war-bixinayay dilka marxuumka.
Inkastoo aysan jirin cid sheegatay inay ka dambeysay dilka mas’uulkan ayaa haddana waxay mas’uuliyiinta dowladdu ku eedeeyeen dilkaas Al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa Muqdisho kusoo kordhayay falal ammaan-darro ee ay geysanayaan kooxaha hubeysan, iyadoo toddobaadkii hore lagu dilay caasimadda howlwadeen ka tirsan Raadiyo Muqdisho iyo ruux Somali-Swedish ah, halka la dhaawacay haweeney ay isku xisbi ka tirsanaayeen oo la socotay.
Xilli ay ammaan-darradan jirto ayaa waxay mas’uuliyiinta amnigu mar walba sheegayaan inay fashiliyeen weerarro waxyeello lagu geysan lahaa, iyadoo la isweydiinayo sababaha soo kordhiyay ammaan-darrada magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.